ပက်ထရစ်ဂျွန် Flueger Post-'Precess Diaries 'ပြောင်းလဲခြင်း - သတင်း
မင်္ဂလာဆောင်ဖက်ရှင် ဆံပင် Gynaec ဘယ်လို စီမံကိန်း & အကြံဥာဏ် မိဘအုပ်ထိန်းခြင်း နည်းပညာ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ချက်ပြုတ်နည်းများ ပြည်တွင်း
ပါးစပ်ပိတ်ထား! ဒီ Nerdy 'မင်းသမီးဒိုင်ယာရီ' သရုပ်ဆောင်ယခု '' Chicago P.D. '' အပေါ်တစ် Hunk Is
ဒါဟာ 17 နှစ်ကြာကတည်းကဖြစ်ခဲ့သည် မင်းသမီးနေ့စဉ်မှတ်တမ်းများ အံ့သြစရာမဟုတ်ခဲ့ပြန်လွတ်လာခဲ့သည် အများကြီး ပြောင်းလဲသွားပြီ
တစ်ခုအနေနှင့်မန်ဒီ Moore သည်ဒင်းနစ်သည်ရုပ်ရှင်ပြသရန်အတွက်သင့်လျော်သည်ဟုမထင်တော့ပါ၊ သို့သော်ရုပ်ရှင်မှသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး လည်းရှိသည်။ တကယ် မိမိအရူပသို့ကြီးပြင်း။ ဟုတ်တယ်၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ရုပ်ရှင်မှာယေရမိကိုဆံပင်ညားသူတစ်ယောက်အဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ပက်ထရစ်ဂျွန်ဖလိုဂရားဟာအခုဆိုရင်မီးခိုးမြူနေတယ်။ သင့်ကိုယ်သင်ကြည့်ပါ
Disney & NBC
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိဆယ်ကျော်သက် romcom တွင်အန်းဟတ်ဝေး၊ Moore နှင့်ဂျူလီအင်ဒရူးတို့နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ပြီးသည့်နောက်ဖလိုဂျရ်သည်သရုပ်ဆောင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 4400 Mahershala Ali ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိသူနှင့်အတူ Chuck Cranston သည် 2011 version တွင်ပါဝင်ခဲ့သည် မင်္ဂလာပါ ။
အခုတော့ 34 မှာသူအပေါ်အဓိကဇာတ်ကောင်ပါပဲ ချီကာဂို P.D. , Adam Ruzek, Chi Town ၏ရဲဌာန၏ထောက်လှမ်းရေးယူနစ်အတွက်အရာရှိတစ် ဦး ကစားခြင်း။ တကယ်တော့သူကရှေ့ပြေးကတည်းကပြပွဲအပေါ်သရုပ်ဆောင်ရဲ့, ဒါပေမယ့်သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ နေ့စဉ်စာတိုက် ကျနော်တို့နှစ်ခုနှင့်နှစ်ခုအတူတူထားသောသူ၏အသွင်ပြောင်းထောက်ပြသည်။
ငါတို့သာလား၊ တစ် ဦး ဂျော့ခ်ျ Clooney ဆွဲ ?
ဆက်စပ် : တစ် ဦး က '' ဥပဒ & အမိန့် '' Spinoff လမ်းပေါ်မှာ & ဒါဟာအခြားမည်သည့်မတူဘဲပါပဲ
Categories နည်းပညာ ချက်ပြုတ်နည်းများ Gynaec
ရှေ့ဆံပင်ဖြတ် indian စတိုင်